ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မြင်တာတွေ့တာကို ဟောဆိုလို့ မြင်တာတွေ့တာကို ဟောမည်
ကျတော်အား ပေးပို့ထားကြသော မိတ်ဆွေများ၏စာကို မတင်ဖြစ်ချင်းကို သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်...ကျတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ယောဂီတရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်နေရလို့ ဖြစ်သည်...
ဟား ကိုယ်တော်ချောတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းသွားတာလားလို့ စိတ်ထဲမှာ စဉ်းစားစရာတွေးစရာတွေ ပေါ်လာနိုင်သည်…စာရေးသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသာဿနာတိုးတက်ဖို့အလို့ဌါ ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီနေချင်းသာဖြစ်သည်...
အတိတ်ဘဝကို ပြန်မြင်နိုင်ဖို့ ဤသို့သော်နည်းလမ်းဖြင့်သာ ပြန်၍မြင်နိုင်မည့်ဟု ဆိုသောကြောင့် ယခုလက်ရှိစာရေးသူ(ကိုယ်တော်ချော)သည် ဝိပဿနတရားအားထုတ်နေရပါသည်...ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ကျတော်မေးတယ် မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဂေါတာမရဲ့ဘဝပေါင်း လေးအသင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဘဝပေါင်းကို ဖော်ပြပေးပါလို့ ကျတော်မေးတယ် သူတို့တွေ မဖြေတတ်တော့ဘူး …
ကျတော်ဆက်ပြောရတော့တာပေါ့ ဟာဒီလိုဘဝဖြစ်စဉ်များကို အတိအကျဖော်မပြနိုင်လျှင် သူ့အတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့သူတွေ ဘယ်လို့လုပ်လိုက်ကျင့်ရမလဲ…ဒါနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသာဿနာတိုးတက်ဖို့အလိုဌါ စာရေးသူလည်း ဝင်ရောက်ကူညီပြီး တရားကျင့်ရတော့တာပေါ့…
အိုး တကယ်တကယ် ဂေါတာမနဲ့ စာရေးသူတို့ပတ်သက်ခဲ့သော ဘဝပေါင်းဖြစ်စဉ်တွေကို မြင်ရတော့တာပဲဗျာ….. စာရေးသူနဲ့ ဂေါတာမတို့၏ ပတ်သက်ခဲ့သော အတိတ်ဘဝကံအကြောင်းကို စာရေးသူမြင်ပြီးသလောက်အနည်းအကျဉ်းမျှသာ ပြောပါရစေ...
ဂေါတာမသည် စာရေးသူ၏အကြင်ဇနီးမယားအဖြစ် ဘဝတစ်သောင်းစာရေးသူအား ပါရမီဖြည့်ဖူးခဲ့သည်...ဂေါတာမသည် သူ၏အကြင်ယောင်္ကျာ ကျတော်(ကိုယ်တော်ချော)အပေါ် မယားတို့၏ ထားရှိရမည် ဝတ်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့သည်…
ညစဉ်ညစဉ် စာရေးသူ(ကိုယ်တော်ချော)နှင့် ဂေါတာမ နေထိုင်ပြုမူဆက်ဆံပုံများကိုလည်း တွေ့လာရပါတယ်….ဆက်လက်ရေးသားဖို့ မသင့်တော်၍ ဤအပိုင်းကို ကျန်ထားခဲ့မည်….
ဆက်လက်ပြီး စာရေးသူ သူဌေးမင်းဘဝငါးထောင်ဖြင့် အသက်ရှင်စဉ်ကာလတွင်လည်း စာရေးသူအိမ်၌မွေးထားသော ခွေးတကောင်အဖြစ် ဘဝပေါင်းငါးထောင်တိတိ စာရေးသူနှင့် ဘဝဆုံဆည်းဖူးခဲ့သည်…
ကျန်ရှိသည့် ဘဝပေါင်းငါးထောင်မှာလည်း စာရေးသူ၏အိမ်၌ သူတောင်းစားဘဝအဖြစ် စာရေးသူထံတောင်းစားရသောဘဝအခြေအနေမျိုးဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ရသည်…တနည်းအားဖြင့် ဂေါတာမသည်စာရေးသူ၏ မေတ္တာသဒ္ဒါတရားထားရှိမူကို ခံရသည်….
သို့ပါသောကြောင့် ဂေါတာမသည် စာရေးသူနှင့် ဘဝပေါင်းနှစ်သောင်းမျှကို ဆုံဆည်းခဲ့သည်….ကျန်ရှိသည့် ဘဝပေါင်းရှင်ဘုရင်ဘဝမျိုးများကို ဂေါတာမရရှိခဲ့ပါသည်…ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဂေါတာမ ယုန်မင်း မျောက်မင်း စသောဘဝများကို ဖော်ပြရေးသားကြသည်…
စာရေးသူ အနေနဲ့လုံးဝနားမလည်မိတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ စာရေးသူ(ကိုယ်တော်ချော)နှင့် ပတ်သက်ခဲ့သော ဘဝပေါင်းနှစ်သောင်းအား ဘာကြောင့် ဖော်မပြကြသည့်ကို စာရေးသူနားမလည်မိအောင် ဖြစ်မိပါသည်… ကျင့်ရဲ့သားနဲ့ မမြင်တာဘဲလို့ စာရေးသူနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးထားသည်…..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ယူဆထားသောမိန်းမသားများဘဝမှာ ဘုရားအဖြစ်သို့ မရောက်နိုင်ဘူးဟုဆိုသောကြောင့် ဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်ရှိဘဲ အဖန်ဖန်သံဿရာမှ မကျွတ်မလွတ်ဘဲ သံဿရာဘဝအဆက်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်နေနေရသည်….
ယခုလက်ရှိ အခြောက်မင်း(မိန်းမလျာ)ဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်နေရကြောင်းကို စာရေးသူ အာရုံမှာ ပေါ်လာခဲ့သည်….ကျန်ရှိသော ဖားအောက်တောရကျောင်းမှာ ကျင့်ကြံသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင် သူတော်ကောင်းတို့ကော ကျတော်လိုပဲ မြင်ကြရဲ့လားလို့ မေးချင်ပါတယ်….(စကားချက်- စာရေးသူ (ကိုယ်တော်ချော)သည် ဖားအောက်တောရကျောင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို အကြံပြုလိုသည်မှာ ဖားအောက်မှာ မကျင့်ပါနဲ့လို့ ဖားအောက်မှာ ဂွေးစိပဲ ရှိပါတယ်လို့ ဖားက အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာဟာ မြေပြင်နဲ့ လွှတ်တာပါ အောက်ပိုင်းက ခန္ဓာဂွေးစိက မြေပြင်နဲ့ထိပါတယ်လို့ ဒါကြောင့် ကျင့်မယ့်ဆိုရင် မြင်းအောက်တောရကျောင်းမှာ ကျင့်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်)
အောက်က ကျတော်မြင်ရသော ဂေါတာမရဲ့ယခုလက်ရှိဘဝပုံပါ သူရဲ့ မျက်နှာကိုသာကျတော်မြင်နိုင်ပေမယ့် သူရဲ့နာမည် သူရဲ့လိပ်စာကို မသိမမြင်ရသေးဘဲ ရှိနေပါတယ်…ဆက်သွယ်မူဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်သွားလိုက် မိတချက် မမိတချက် ဖြစ်နေရပါတယ်… ရှုစားတော်မူကြပါခင်ဗျာ
အကို ကုလားလေးနော အဲယောင်လို့ ကုလားမလေးနော့ ရှောက်သီးဆေးပြားရောင်းစားတယ်နော် ဘယ့်သူ့ကိုမှ မနှောင့်ယှက်ဘူးနော် အကို ကုလားမလေးနော ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားတယ်နော် ကျမကို အားပေးသွားကြအုံးနော် (မည်သူမဆို အားပေးနိုင်သည်)
Posted by messenger at 11:06 PM
Labels: ကျီစားတာ, ကျတော်၏ မိတ်ဆွေများသို့, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ